कठै ! प्युठानमा घरमाथीबाट ख’सेको प’हिरोले घर पुरिदा ११ महिनाकि बालिकाको मृ’त्यु ,परिवार आफन्तको घरमा बस्दै – Butwal 24 News
कठै ! प्युठानमा घरमाथीबाट ख’सेको प’हिरोले घर पुरिदा ११ महिनाकि बालिकाको मृ’त्यु ,परिवार आफन्तको घरमा बस्दै
September 3, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on कठै ! प्युठानमा घरमाथीबाट ख’सेको प’हिरोले घर पुरिदा ११ महिनाकि बालिकाको मृ’त्यु ,परिवार आफन्तको घरमा बस्दै
शुक्रबार प’हिरोले घर पु’रिदा घा’ईते भएकी बालिकाको उपचारको क्रममा मृ’त्यु भएको छ । प्यूठान नगरपालिका वडा नम्वर ४ ठुटेसिमल निवासी कुल बहादुर थापाको ११ महिनाको छोरीको उपचारको क्रममा मृ’त्यु भएको हो । घरमाथीबाट ठूलो ढुंगा सहित ख’सेको प’हिरोले घर पु’रिदा बालिका घा’ईते भएकी थिइन ।
उनलाई उपचारका लागि बुटवल लगिएको थियो । टाउकोको श’ल्यक्रिया गरेपनि सफल हुन नसकेको र सोमबार मृ’त्यु भएको स्थानीय एकराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । प’हिरो पी’डित परिवार घर भ’त्किएपछि दाजुको घरमा बस्दै आएका छन् । बच्चालाई सुताएर काममा गएको बेला प’हिरो गएको थियो ।
यस्तै,लमजुङमा आ’गला’गी हुँदा द’म्पतीको नि’धन भएको छ । मंगलबार बिहान साढे १ बजेतिर मर्स्याङ्दी गाउँपालिका- ९ सेग्लेस्थित धन्सारमा बस्दै आएका दम्प’तीको निध’न भएको प्र’हरीले जनाएको छ । मृ’त्यु हुनेमा ५६ वर्षीय धर्मराज भन्डारी र उनकी श्रीमती पशुपती रहेको प्र’हरी नायब उपरीक्षक कृष्णबहादुर कार्कीले बताए । खाना पकाउने ग्यास वि’स्फो ट भएर आ’गला’गी भएको हुन सक्ने प्र’हरीको अनुमान छ । आ’गला’गीबाट धन्सार पूर्ण रुपमा जलेको छ ।
‘भारतले जित्नु पर्ने थियो, नेपालले खराब मैदानको कारण राम्रो खेलेको हो’- प्रशिक्षक स्टिमाक
मुख्यमन्त्रीकै संलग्‍नतामा सांसदको अपहरण र बन्‍धक !